ရာသီဥတု ပူပြင်းမှုကြောင့် အပူလျှပ်လူနာ ၅ဝ ကျော်ရှိခဲ့သည့် မန္တလေးတွင် ယခုအခါအပူဒဏ် ခံစားရမှု ? - Yangon Media Group
”ဇွန်လထဲမှာဆိုရင် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးမှာ ၁ဝ ရက်ကနေ ၁၅ ရက်ခန့်အထိ မိုးထစ်ချုန်းရွာ နိုင်ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းမှာ အ ပူဒဏ်ခံစားရမှုတွေလျော့ကျသက် သာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ (ပထမ)ဆယ်ရက်ပတ်အတွက် ခန့်မှန်းချက်အရတော့ အမြင့်ဆုံး အပူချိန်က ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အနိမ့် ဆုံးအပူချိန်က ၂၆ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်နဲ့ ပျမ်းမျှအပူချိန်က တော့ ၃၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အသီးသီးရှိ နိုင်ပါတယ်”ဟု မိုး လေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (အထက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲ) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်လွင်ဦး က ဇွန် ၁ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့၏နေ့အပူချိန်အ နေဖြင့် နှစ် ၃ဝ အတွင်း မှတ်တမ်း များအရ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်က ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ စံချိန်တင် ရောက်ရှိခဲ့၍ ယခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၂ ရက်မှစတင်ကာ ၄ဝ ဒီဂရီစင်တီ ဂရိတ်အထက်တွင် ရှိနေခဲ့ကာ ပြီး ခဲ့သည့် မေ ၉ရက်က ၄၄ ဒသမ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ရောက် ရှိခဲ့သော်လည်း စံချိန်သစ်တင်နိုင် ရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ ၁ဝ မိ နစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ဖမ်းယူတိုင်းထွာ သည့် မိုးလေဝသအခြေအနေများ ကို နေပြည်တော်ရှိ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ပို့ပေးကြောင်း ¤င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
”ဒီနှစ်နွေရာသီကာလမှာ ရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့် ရောက် ရှိလာကြတဲ့အပူလျှပ် (Heat Stroke) လူနာအရေအတွက် စုစုပေါင်း ၅ဝ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူက ခြောက် ဦးရှိရာမှာ တခြားတိုင်းဒေသကြီး နဲ့ ပြည်နယ်တွေကပါ လာရောက် ကုသကြတာပါ။ သေဆုံးသွားသူ တွေကတော့ သွေးတိုး၊ နှလုံးတို့ လို ရောဂါအခံရှိသူတွေဖြစ်ပြီး အ ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ မိုးရွာမှုတွေရှိ လာလို့ အပူလျှပ်လူနာတွေ တက် ရောက်ကုသမှုမရှိတော့ပါဘူး”ဟု မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေး ရုံကြီးမှ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးအ ရာရှိ ဦးမင်းလွင်က ဇွန် ၁ ရက် တွင် ပြောကြးသည်။
မန်ယူကို အနိုင်ရပြီးနောက် မန်စီးတီးနှင့် နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာတို့ စံချိန်သစ်တင်၊ ချန်ပီယံဖြ??